Andriamanitra (finoan-drazana malagasy) Info. About. What'
Silamo taty amin ny kontinenta. Isan ny singa iray mandrafitra ny finoan - drazana malagasy ny sikidy. Ny mpisikidy, izay tsy iza fa ny ombiasa na ombiasy
Madagasikara, indrindra ny Malagasy ankoatry ny fivavahan - drazana sy ny finoana silamo sy ny hafa koa. Ny 41 n ny Malagasy dia Kristiana, araka ny tatitry
mankeny Andemaka, alemahon Andriamanitra Mankeny Volasarika, sarihon Andriamanitra Mankeny Ambodikongona, kongonin Andriamanitra mankeny Ambanidia, mbiaza